Shiinaha Carbide Rotary Burr SC Qaabka -Silinta Silsiladda leh soo -saareyaasha Radius End iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xinhua
Carbide Rotary Burr SC Qaabka -Silinta Silsiladda leh Radius End
Burburka roogga carbide waxaa sidoo kale loo yaqaan gooyaha xawaaraha sare ee carbide, ama gooyaha caaryada carbide, Si weyn ayaa loogu adeegsadaa berrinka bir -ka -shaqaynta, ka -shaqaynta dusha birta iwm
Machining noocyo kala duwan oo ah maaddo bir ah oo ay ku jiraan ≤ HRC65 bir adag.
● Halkii laga heli lahaa giraangiraha yar yar ee emery, oo aan lahayn wasakhda budada.
Kordhinta wax -soo -saarka dhawr jeer toban jeer intii la adeegsan lahaa qalabka gacanta iyo saddex illaa shan jeer intii la isticmaali lahaa giraangirihii yaraa ee dhallaanka ahaa.
Lahaanshaha cimri dheer oo toban jeer ka badan biraha birta xawaaraha sare leh iyo wakhtiyada fivty ka badan giraangiraha yar yar ee emery.
● Dhammee farsamaynta noocyada kala duwan ee godadka dhinta.
Ka -saaridda bur -burinta kabka, dheefta iyo firdhinta alxanka ee shirarka alxanka.
Angle Xagasha dabaysha, kuul wareegsan ama biibiile ku jira qaybaha farsamada.
● Tuubbooyinka ama duugista.
Nadiifinta kanaalka daloolka.
Daloolinta oo si sax ah u shiidi.
Qaabka Silsiladda oo leh Radius End Type c C0313X03-25 3 13 3 38 X
S: Ma dalban karaa amar raad -raac?
J: Haa, waxaan aqbalnaa amar tijaabo oo yar.
Alxanka qalinka, Kani waa habka alxanka guud ee alaabada tayada sare leh.
Hore: Carbide Rotary Burr SB Qaabka -Silinta Silsiladda leh Dhammaadka Goynta
Xiga: Carbide Rotary Burr Qaab SD -Bal Qaabka